GA GF yakateedzana pasherufu yeplate firiji, China GA GF yakateedzana masherufu eplate furiza Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Square Technology Boka Co, Ltd.
Sirifiti yeplate furiza inogadzirwa neProte Technology inogona kukurumidza kuomesa mhando dzakawanda dzezvigadzirwa, senge hove uye shrimp, hove, miriwo, nyama yakapatsanurwa, huku yekuparadzanisa, uye zvakawanda zvidiki-zvakapakirwa chikafu chakaomeswa. Mahwendefa anoiswa chakatwasuka kunge masherufu apo nzvimbo yakaturikidzana yakagadziriswa. Zvigadzirwa zvichaiswa pasherufu ndiro yekutonhora. Yakasiyana neyakajairika yakatwasuka ndiro mafiriji, saizi yayo hombe inogona kugadzirirwa yepamusoro kutonhora kugona.
● Iko kusanganiswa kwefriji yekufema uye giya rekubata. Chigadzirwa chinobata iyo firiji aruminiyamu ndiro padivi payo, nepo mafeni achivhuvhuta mweya unotonhora uchiyerera nepamusoro uye nemativi echigadzirwa.
●Iyo ndiro yakaitwa yegungwa yegungwa aluminium. Iyo firiji inofamba ichipfuura ma ducts mazhinji mukati meplate yealuminium. Iyo ndiro yakapfava, yakasimba, ngura inodzivirira uye yakanaka mukushisa kwekushisa.
●Chimiro chinopisa-chakakurisa simbi, yakanyanyisa kuita ngura.
●Iyo yakavharirwa yakavharirwa nechidimbu chimwe chePolyurethane inopupuma furo kuti ive nechokwadi chimiro chakasimba uye kudzikisa kutonhora kurasikirwa nekubvisa majoini.
◆ Kutonhora kugona:>3000kg / batch mangé (Kubva pa: 15Kg / block, dhizaini dhizaini: 600mm × 400mm × 80mm)
◆Plate nhamba: 10 Inotonhora matete: 10
◆Plate inotonhora nzvimbo: 5500mm × 1200mm
◆Kubviswa kweplate: 144mm; Chibvumirano cheNet: 110mm
◆Liquid zvitengeswa: Pump
◆Refrigeration mutoro: 105kw (+ 35 ℃ / -35 ℃) (Nemhepo inotonhorera)
◆Infeed temp.:+20℃ Yakabudiswa temp.:-18℃
◆Mhepo velocity pakati pamahwendefa: 2m / s
◆Kunopindirana divi: 8520mm (L) × 2115mm (W) × 2360mm (H)
● Yakakosha kune yega hove inotonhora, shrimps, chikafu chakagadzirira, huku uye zvimwe diki yakarongedzwa .